DEG DEG: Ciidamada Booliska Muqdisho & Koofiyad Casta Villa Somalia oo heegan la galiyey iyo Wararkii u dambeeyey – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa sheegaya in ay halkii ugu dambeysay marayaan qabanqaabada banaanbaxyo looga soo horjeedo dawladda Faderaalka, gaar ahaana ficilada dilka iyo xariga ah ee lagu hayo qaar badan oo kamid ah Bajaajleyda iyo Shacabkii ka banaanbaxay dilkooda.
Wararka ayaa sheegaya in ay dawladda Faderaalka heegan galisay ciidamadeeda Amniga, waxaana maanta dadaal xoog badan lagu bixiyey sidii loo baajin lahaa banaanbaxan, waxaana galinkii dambe ee maanta Puntlandtimes ay heshay Boorarka dadkaas ay daabacdeen qaar kamid ah oo ay ka muuqdaan Erayo ka dhan ah dawladda Faderaalka ee SOomaaliya.
Ciidamada Amniga ayaa heegan la gashay jidadka ayaa lasoo dhigay, waxaana xoogooda la keenay Jidadka Maka Al Mukara oo laga xiray KM4 iyo sidaas oo kale jidadka muhiimka ah ee gala Madaxtooyada Soomaaliya.
Laamaha Ammaanka ayaa caawa Digniin ka soo saaray banaanbaxyo dhaca, waxayna sheegeen in ay ka dambeeyaan waxay ugu yeereen kuwa ka soo horjeeda Ammaanka caasumada, laakiin ilaa hadda ma jirto cid hadashay oo u jawaabtay.
Madaxweynaha, Raysalwasaaraha iyo Kusimaha Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya oo maanta kulan yeeshay ayaa isku afgartay in la caburiyo cid kasta oo isku dayda banaanbax ka dhaca magaalada Muqdisho.
DEG DEG: Farmaajo, Kheyre & Fahad Yaasiin oo kulan deg deg ah ka yeeshay Banaanbaxyada soo wajahan Iyo Xaaladdihii u dambeeyey
Madaxweyne Farmaajo wuxuu dhawaan si cad ugu dhaartay in uu gacan bir ah ku qaban doono, cid kasta oo isku dayda in ay qabato Banaanbax looga soo horjeedo dawladdiisa, wuxuuna cadeeyey in ay tahay dawladdu dadku taageersan yihiin, waa sida uu hadalka u dhigaye.